NamasteNEPALI.com: पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाकी श्रीमतीलाई पूर्वमन्त्री गुप्ताले कसरी गरे ब्ल्याकमेलिङ ?
पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाकी श्रीमतीलाई पूर्वमन्त्री गुप्ताले कसरी गरे ब्ल्याकमेलिङ ?
ललितपुर, भदौं २१। पूर्वडिआईजी रञ्जन कोइरालाकी कान्छी श्रीमतीसँग ब्ल्याकमेलिङ गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ता पक्राउ परेका छन्। ललितपुरको ताल्छिखेलस्थित डेराबाट प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। जेठी श्रीमती हत्याको आरोपमा जेल जीवन बिताइरहेका कोइरालाकी कान्छी श्रीमती तारा रेग्मीलाई १ सय पटकभन्दा बढी फोन गरेर गुप्ताले ५० लाख मागेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
नदिए अपहरण गर्ने धम्की दिएका थिए। रेग्मी रेड रोज इन्टरनेसनल प्रा.लि. धोविघाटकी सञ्चालिका हुन्। वकिलसँग बसेर छलफल गरिरहेका गुप्ताले प्रहरी देख्नासाथ मुद्दा मिलाउन आग्रह गरेका थिए। त्यसका लागि डिएसपी ईश्वर कार्कीलाई गुप्ताले मोटो रकमको प्रलोभन देखाएका थिए। तर, डिएसपी कार्की लोभलालचमा परेनन्।
रञ्जनकी जेठी श्रीमतीको हत्या अभियोगमा रन्जनलाई सर्वस्वसहित जेल सजाय भएको थियो। तारालाई पनि ११ महिना १० दिनको जेल सजाय अदालतले तोतेको थियो। पछि तारा पुनरावेदनमा गईन्। अदालतले सुनेन। त्यसपछि अर्को मानिसमार्फत ताराले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिईन्। यस विषयमा अदालतले कुनै जवाफ दिएको छैन्।
प्रायः मलेसियामा बस्ने तारा नेपाल आएको बेला रञ्जनलाई भेट्न डिल्लीबजार कारागार जान्थिन्। कारागारमा रञ्जनका सबैभन्दा मिल्ने साथी थिए, पूर्वमन्त्री गुप्ता। त्यस बेलामा नै तारासँग परिचय भएको गुप्ताले बताएका छन्। ब्यापारी पवन सांघाइको अपहरण गरेको अभियोगमा गुप्ता त्यसबेला कारागारमा थिए।
३ वर्षको जेल जीवन बिताएर छुटेपछि गुप्ताले तारालाई ब्ल्याकमेलिङ गर्न थाले। तारा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको उनलाई थाहा थियो। अदालतले ११ महिना १० दिन जेल सजाय तोकेको बारेमा पनि उनलाई ज्ञान थियो। जेलबाट छुटेपछि उनले तारासँग पहिलो पटक १० लाख मागेको ललितपुर प्रहरीका एसएसपी पिताम्बर अधिकारीले जानकारी दिए।
गुप्ताले प्रहरीको फरार सूचीबाट नाम हटाइदिने र जेल बस्नु नपर्ने वातावरण मिलाइदिने भन्दै तारालाई फकाएका थिए।
पहिले १० लाख मागेका गुप्ताले कहिले २०, कहिले ३० गर्दै ५० लाख पुर्‍याएको एसएसपी पिताम्बर अधिकारीले बताए। ताराले प्रहरी समक्ष गुप्ताले ५० लाख मागेको नदिए ज्यान मार्ने र अपरहण गर्ने धम्की दिएको बताएकी छिन्। ताराले गुप्ताको फोन उठाउन छाडेपछि उनकी छोरीलाईसमेत फोन गरेर दबाब दिने गरेको प्रहरीले बताएको छ।
छोरीले घटनाबारे जानकारी गराएपछि रञ्जनले नै ललितपुर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीले गुप्तासँगै तारालाई पनि पक्राउ गरेको छ। ११ महिना १० दिन जेल सजाय तोकेकी तारालाई ललितपुर प्रहरीले जिल्ला अदालतमा बुझाएको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतले तारालाई कारागारमा पठाएको छ।